Topnepalnews.com | केन्याविरुद्ध खेल्न नेपालको प्रारम्भीक टिमः को-को परे उत्कृष्ट २४ मा ?
केन्याविरुद्ध खेल्न नेपालको प्रारम्भीक टिमः को-को परे उत्कृष्ट २४ मा ?
Posted on: February 09, 2017 | views: 434
काठमाडौं,माघ २७ । आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत केन्यासँग हुने खेलका लागि कप्तानमा पारस खड्काको नेतृत्वमा २४ जना खेलाडी छानिएका छन्। आगामी फागुन १ गतेबाट सुरुहुने क्लोज क्याम्पको लागि ५२ खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीको छनोटका लागि ४ टोलीमा विभाजन गर्दै सुपर लिगको माध्यमबाट २४ खेलाडी छानिएको हुन् ।
खेलाडी छनोटमा आइसिसिको प्रतिनिधि भेनकटपपति राजुको उपस्थितिमा कप्तान पारस खड्का र प्रशिक्षक जगत टमाटाको सहभागिता रहेको थियो । खेलाडी छनौट गर्न गएको ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म सुपर लिग खेल खेलाइएको थियो । गएको वर्ष खेलाडीले गरेका प्रस्तुतिका आधारमा सुपर लिगका लागि ५२ खेलाडी छनौट भएका थिए ।
राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमनको प्रयासमा रहेका सुवास खकुरेल, नरेश बुढायर, अनिल मण्डल र पृथु बास्कोटा टोलीमा पर्न सकेनन् । यस्तै यू-१९ मा राम्रो प्रदर्शन गरेपनि ललितसिंह भण्डारी, सुशील कँडेल र सोनु तामाङ पनि टोलीमा परेनन् ।
को-को परे उत्कृष्ट २४ मा ?
नयाँ सदस्यका रुपमा अमित श्रेष्ठ, दिलिप नाथ, कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र श्रेष्ठ छन् । कुशल र दिपेन्द्र यू-१९ टोलीबाट हुन् भने अमित र दिलिपनाथ घरेलु प्रतियोगिता खेल्दै आएपनि सिनियर टोलीबाट खेलेका छैनन् । यस्तै यू-१९ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि टोलीमा पर्न सफल भएका छन् । २४ खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण फागुन १ गतेबाट सुरु हुनेछ र अन्तिम १४ खेलाडी छनौट गरिनेछ ।